I-tonic yasekhaya ebusweni ngezandla zakho: iklasi yeklasi kunye nesithombe. Tonic ebusweni ekhaya
Kule klasi yeklasi siya kwenza i tonic yasekhaya ebusweni ngolu hlobo lwamacube e-ice. Zibizwa ngokuba yi-beauty cubes, njengoko zigqithisa imicu engafihlakeleyo, zithuthukisa ithoni yesikhumba, i-pores eyandisiwe, ilapha izibilini. Izinzuzo zale toni yekhaya zininzi, kodwa kukho ukuchasana - i-couperose, amanxeba avulekile ebusweni, izifo zesikhumba.
I-tonic ye-Ice ebusweni ekhaya - zokupheka kunye neefoto
Siza kwenza ii-cubes ebusini, ikofi, i-juice i-cucumber, amanzi amaminerali, i-chamomile kunye ne-infint. Ukongeza kwiipropati ezixhamlayo zale mveliso, isikhumba siya kuzuza kwiqhwa. Umnxeba wokubanda uya kumenza aphile kwaye aphile. Ngenye indlela, unokwenza iintlobo ezininzi zeetoni ngexesha elilodwa, ukuze usebenzise isithako esifanelekileyo kusasa nangokuhlwa.
I-tonic anti-aging tonic
Iibhubhu zomlambo zijongene ngokufanelekileyo neenguqu zokuqala, ngenxa yokulungiswa kwazo, ubisi kufuneka luthululwe kwiibumba kunye neqhwa, ukuba usebenzise ubisi oluzenzela okanye olutyebileyo, luthinte ngokulinganayo ngamanzi amaminerali.
Ikhofu yekhofi yokutsalwa
Ikhofi yekhofi ilungile kwaye ivuselele isikhumba. Ukuyipheka, ukuphuza ikhofi yendalo eqinile, ngoko utywala isiselo ngomsila ococekileyo, uthele kwi-mold and froze.
I-tonic ye-tint for the cleansing morning
Iqhwa elincinci libuye lihlaziye kwaye likhuthaza isikhumba, kukulungele ukuyisebenzisa ekuseni. Phalaza amaqabunga e-minti ngamanzi amaminerali, qhwa.
Ukucoca itekic tonic kusihlwa
Kusuka kwikomkom i tonic ehlaziyayo kunye nokucoca, kukulungele ukusetyenziswa kwamadya. Ikhukhamba kwi-grater egciniweyo, fakela ijusi uze uyifake.
I-homemade chamomile tonic yesikhumba sengxaki
Ukuba isikhumba sakho ebusweni siba nesifo sokuqhaqhazela, ii-cubom cubes ziya kunceda ukujamelana nabo, zikhubaza i-krisiti. Brew isipuni se-chamomile izimbali kunye neglasi yamanzi abilayo, shiya imizuzu engama-40 ngaphantsi kwesiqhekeza esisihlambulukileyo, umxube, uthele, uphumeze, ukuba kukho amahlumela amancinci, kulungile. Kwakhona, i-daisy igubungela ukutyhila kancinci.
I-tonic yasekhaya ityuwa yesikhumba sengxaki
Iqhekeza elincibilikileyo ilungele inkcenkceshe, kufuneka ihlambuluke imihla ngemihla. Thatha ukutya okanye ulwandle ityuwa, kwiglasi yamanzi afudumele, nciphisa ipoyiji yetyuwa ekhethiweyo, uthele phezu kwezibumba.
Njalo ekuseni nakusihlwa, subula ubuso, intanyeni kunye ne-décolletage nge cubes ze-tonic eyenziwe ngokwabo. Ulusu luya kuqinisekiswa ukuba lunombulelo - ukukhanya, ukucoceka, ukukhanya okuphilileyo.
Ubuhle-emitsha ukusuka ku-Clarins: ukuvuselela iSerum Multi-Intensive
Intlanganiso emva kokudibana kwi-intanethi
Iibhokhwe kunye nombala we-eyelashes: yiyiphi into ofuna ukuyifumana?